माधव नेपालको ताल देखेर मलाई झों’क नै चलेको छ, र पनि म माधव कमरेड भनिराछु :बाँस्कोटा – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारमाधव नेपालको ताल देखेर मलाई झों’क नै चलेको छ, र पनि म माधव कमरेड भनिराछु :बाँस्कोटा
माधव नेपालको ताल देखेर मलाई झों’क नै चलेको छ, र पनि म माधव कमरेड भनिराछु :बाँस्कोटा
काठमाडौं । प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) का प्रभावशाली नेता, सांसद तथा पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले निर्वाचनमा जाने कुरा कुन प्रतिगमनकारी कुरा थियो ? भन्ने प्रश्न गरेका छन् । उनले संसदले सरकार दिन नसक्ने अवस्था भयो भने मुलुक चुनावमा जाने निश्चित् रहेको बताएका छन् ।
आज राति प्राइम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।फरक प्रसँगमा उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अभिभावक सम्झिनेहरुले बा भन्नु नौला कुरा नभएको बताए ।
अहिले ८० वालाहरुले केपी ओलीलाई विदाई गर्न खोजेको र १८ वालाहरुले आई लभ युव केपी बा भन्दै हिँडेको पनि उनले सुनाए । उनले भने-“यो मैले भनेको होईन ।’पत्रकार धमलाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले त केपी बा, केपी बा, केपी बा भनेर यो प्रवृत्तिको टिप्पणी गरेका छन् नि भनेर सोधेको प्रश्नमा नेता बाँस्कोटाले भने-“उहाँका पनि छोराछोरी छन् नि ।
छोरा छन् । छोरी छन् । बा नै भन्छन् होला नि । हजुरबुवा त भन्दैनन् होला नि । अनि नातिनातिनीहरुले हजुरबुवा भन्छन् होला । यो त हाम्रो नाता सम्बन्धलाई प्रकट गर्ने कुरा हो । हाम्रो आत्मियतालाई प्रकट गर्ने कुरा, अभिभावकत्व प्रकट गर्ने कुरा हो नि ।
ठाने गरे, त्यसमा के रु’वाबासी छ त ? माधव कमरेड भन्छन् नि त उहाँलाई, मलाई झों’क नै चलेको छ, उहाँको ताल देखेर । र पनि म माधव क’मरेड भनिराछु । आदरणीय नेता भनिराछु । त्यसैले यसमा के ई’ष्र्या ? ई’ष्र्यामा ज’लेर के हुन्छ ?”भिडियो